“မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးကို မှတ်မှတ်ရရအနေနဲ့မွေးနေ့ဆုတာင်းစကားလေးပြောလာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခန့်သီရိဇော်” – Cele Snap
ချစ်ကပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခန့်သီရိဇော်ကတော့ “အချစ်ဖွဲ့လေညင်း”ဇာတ်လမ်းတွဲကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။ သူမဟာဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာမှာ အောင်မြင်လာတဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ အမူအရာလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ ဝါသနာပါရာအနုပညာလုပ်ငန်းကို ကြိုးစားနေတဲ့သူတစ်ဦးပါပဲနော်။သူမရဲ့အားလပ်ချိန်တိုင်းမှာလည်း ချစ်ရတဲ့ မိဘတွေကို အချိန်ပေးရင်း သာယာတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားလျက်ရှိပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ(၁၁)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့လေးကို ခန့်သီရိဇော်က”Today, my dear mom’s birthday.Happy birthday. Please be happy to haveabirthday. I love my mother so much Please stay beside me foralong time and healthy. I’m sorry I didn’t do anything special for your birthday this year.I will try my best to keep my mother better than now. And I eventually say, “I love you so much”လို့ဆိုပြီ မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်တာလေးကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်သီရိဇော်ရဲ့ မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source….Khant Thiri Zaw’s Facebook
ခဈြကပရိတျသတျကွီးရေ ခနျ့သီရိဇျောကတော့ “အခဈြဖှဲ့လညေငျး”ဇာတျလမျးတှဲကနေ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးဝနျးရံမှုကို ရရှိထားတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပါပဲနျော။ သူမဟာဆိုရငျ ဇာတျလမျးတှဲတိုငျးရဲ့ ကရြာဇာတျရုပျကို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျမှုတှကွေောငျ့ အနုပညာလောကမှာ နရောတဈနရောမှာ အောငျမွငျလာတဲ့သူတဈဦးပါပဲနျော။ သူမရဲ့ ခဈြစရာကောငျးလှနျးတဲ့ အမူအရာလေးတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို အခိုငျအမာရရှိထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ ဝါသနာပါရာအနုပညာလုပျငနျးကို ကွိုးစားနတေဲ့သူတဈဦးပါပဲနျော။သူမရဲ့အားလပျခြိနျတိုငျးမှာလညျး ခဈြရတဲ့ မိဘတှကေို အခြိနျပေးရငျး သာယာတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားလကျြရှိပါတယျ။ ဇနျနဝါရီ(၁၁)ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ မိခငျဖွဈသူရဲ့ မှေးနလေ့ေးကို ခနျ့သီရိဇျောက”Today, my dear mom’s birthday.Happy birthday. Please be happy to haveabirthday. I love my mother so much Please stay beside me foralong time and healthy. I’m sorry I didn’t do anything special for your birthday this year.I will try my best to keep my mother better than now. And I eventually say, “I love you so much”လို့ဆိုပွီ မှေးနဆေု့မှနျတောငျးပေးလိုကျတာလေးကို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ခနျ့သီရိဇျောရဲ့ မှေးနဆေု့မှနျတောငျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှအေားလုံးသာယာပြျောရှငျတဲ့နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။